Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Android in aad soo iibsaday? Dhibaatada ay leedahay iPhone waa in Apple ma ogola in aad ku kaydiso xiriir toos ah SIM card. Inkasta oo laga yaabo in sababaha Waayo, kuwaas oo qaar badan, oo ay ku jiraan dhinacyada ammaanka (sida mid isticmaasha SIM si fudud u heli kartid aad xiriirka la leedahay), waxa aanu ka dhigan tahay in geeddi-socodka lagu soo xiriiro wareejinta noqon karaa eheeyn.
Haddii aad telefoonada ka iPhone wareegaya Android, waxaa laga yaabaa in aad la yaaban yihiin sida ay u gudbiyaan xiriirada iPhone in Android sida labada telefoonada isticmaali OS gabi ahaanba kala duwan. Waxaa jira saddex siyaabood fududahay in la sameeyo kala iibsiga oo aan usingiTunes, kaas oo caadi ahaan qaadataa dhowr siyaabood oo in. Waxaan eegi doonaa saddex siyaabood si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in telefoonada Android.
Part1: Transfer Xiriirada ka iPhone in Android isticmaalaya Email
Part2: Transfer Xiriirada ka iPhone in Android isticmaalaya iCloud
Part3: Transfer Xiriirada ka iPhone inay si fudud oo dhakhso ah Android
Sida aad isticmaalayso Android, ayaa waxaa preinstalled app ee Gmail. Gmail ku siinayaa hab fiican si aad u waafajinta xiriir toos ah in aad telefoon cusub Android. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa dhammaan xiriirada aad foomka of vCards. Ma aha in ay adag tahay, iCloud aad iPhone in karaa si fudud. Waa kuwan tallaabooyinku in la raaco:
Step1: Gal on in aad iCloud via iPhone ama computer. Tag xiriiro.
Step2: Haddaba tag gunta iyo guji goobaha, dooro oo dhan.
Step3: Haddaba tag in goobaha la mid ah oo hadda ay doortaan Vcard dhoofinta.
Step4: Hadda faylka la soo bixi doonaa si aad u computer sida file VCF.
Step5: Haddaba tag in gmail.com oo ay isticmaalaan aqoonsiga isla waxaad isticmaali aad Android Gmail.
Step6: Riix Gmail ku geeska bidix ee kore iyo xiriirada la xusho.
Step7: From sare waxaad ka arki kartaa badhan ka badan, guji ku yaal oo ka mid ah liiska dropdown u dejinta xusho. Dul file vcf aad oo la badbaadiyey ka iCloud.
Step8: Gmail si toos ah u badbaadiyay iyo syncs xiriiro si ay qalabka la isticmaalayo xisaabta isla Gmail.
Sida aad la isticmaalayo iPhone ee la soo dhaafay, oo aad xiriir la taageeray doonaa xisaabtaada iCloud. Waxaad badbaadin karo dhammaan xiriirada aad qaab Vcard ah, kuwaas oo si fudud loo wareejin karaa qalab kasta oo aad rabto in aad si sahlan. Raac tallaabooyinka hoose si aad u gudbiyaan xiriirada aad ka iCloud.
Step1: Tag iCloud.com ka browser telefoonka android ee.
Step2: xiriirada Ama dooro mid mid ama ay doortaan oo dhan ka saldhigyada.
Step3: Haddaba tag in goobaha iyo doorto ikhtiyaarka dhoofinta vCard. Hadda faylka vcf ku jirto xiriirada aad dhammu u wada badbaadi doonaan telefoonka.
All inaad samayso waa in ay maraan si ay meesha vCard ah waa la badbaadiyey oo kaliya ka jaftaa ku yaal. Dhamaan xiriirrada ku badbaadi doontaa android fudayd. Doonayn in aad wax samayso. Waxaad kaloo isticmaali kartaa doorasho dejinteeda ka xiriirada ka dibna uu dedeg vCard.
Wondershare MobileTrans waa software weyn u wareejinta macluumaadka u dhexeeya laba taleefan oo kala duwan. Software ayaa si fudud u wareejin karaan xiriirada, sawiro, fariimaha qoraalka ah, video files, jadwalka taariikhda, abuse iyo qaar badan oo geedi socodka ka mid click. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Waxa ay taageertaa macruufka, Android, Microsoft, iyo Symbian. Guud ahaan, waxa ay ka shaqaysaa in ka badan 3000 telefoonada.
Dhammaan ka kooban xoojiyaa waxaa loo wareejiyey in tayada asalka ah.
Waa boqolkiiba boqol nabad iyo xasilooni sida uu u adeegsanayaa your computer sida dhexdhexaadka ah.
Waxa kale oo ay bixisaa qaababka kale sida tirtiro xogta ku saabsan telefoonada jir ah, dib u soo celinta laga helay ilo kala duwan oo gurmad iwm
Interface waa dareen iyo habka qaadataa dhowr daqiiqo oo kaliya.
Ayaa qalab kala iibsiga phone hal-click kuu ogolaanaysaa inaad nuqul ka xiriirada, SMS, sawiro, muusig iyo ka badan oo u dhexeeya Android, Symbian iyo qalabka macruufka, iyo gurmad iyo soo celinta xog phone effortlessly.
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Android
Waxaad kala soo bixi kartaa software ka site wondershare. Waxaa jira version lacag la'aan ah iyo version iibsiga. Wixii feature ugu fiican, ka iibsan software ah. Si loo sameeyo kala iibsiga aad u baahan doontaa computer rakibay la MobileTrans iyo USB fiilooyinka labada telefoonada. Waa kuwan tallaabooyinku in la raaco
Step1: Burcad software ku daaqadaha ama pc Mac aad.
Step2: Hadda dooro ikhtiyaarka buluug ah, oo waa kala iibsiga phone-ka-phone.
Step3: On screen soo socda, waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan labadaba telefoonada. Hubi in aad isticmaasho cable USB telefoonada kala ah in la sameeyo xidhiidhka ka aamin.
Step4: Waxaa lagu ogaan doono labada telefoonada. Mid ka mid ah wax aad leedahay si aad u hubiso in qalabka il yahay iPhone iyo qalabka ahaanshihiinnu waa Naare android. Isticmaal dhibic ka hoos menu in la helo qalabka.
Step5: Haddaba tag guddi dhexe iyo in la hubiyo xiriirada waxaa saxday oo ku tusi doonaa tirada xiriirada aad iPhone.
Step6: Hadda waxaad leedahay in la sameeyo oo dhan waa guji Start Copy. Tani waxay bilaabi doonaan habka iyo macluumaadka la soo gudbin doonaa. Waqtiga ay qaadato ku xirnaan doontaa qadarka xogta wareejiyo.
Ilaa kala iibsiga la dhammeeyo, aadan ku dhibin telefoonada ah. Marka geeddi-socodka la soo gabagabeeyo, barkinta labada telefoonada iyo aad u hubiso qalab Android. Dhammaan xiriirada laga heli doonaa telefoonka.
> Resource > Transfer > 3 Easy Siyaabaha Bedelka Xiriirada ka iPhone in Android Phones